Farmaajo iyo Kheyre ayaa isku heesa ma waxqabad baa? | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Farmaajo iyo Kheyre ayaa isku heesa ma waxqabad baa?
Farmaajo iyo Kheyre ayaa isku heesa ma waxqabad baa?
Muddo xileedka Dowladda hada jirta waxaa ka haray hal sano iyo 2 bilood, xukuumad kasta waxqabad keeda waxaa lagu salleeyaa waxa ay ka qabato arimaha Amniga, Dhaqaalaha, Dhameystirka Dastuurka, Dib u heshiisiinta, Adeegyada Bulshada, Siyaasadaha arimaha dibedda iyo gudaha, Doorasho qof iyo cod ah in dalka la gaarsiyo IWM.
Previous articleTaliye ka tirsan Puntland uu ku dhacay Cudurka HIV/AIDS oo la Dalacsiiyay
Next articleUgu dambeyntii Ra’iisul Wasaarihii Ciraaq oo Is Casilay
General Galaal ” Dhuusomareeb waxaa ka taagan Xiisad Siyaasadeed iyo mid...
Aways Geedi - August 28, 2019 0
Xalaad jahawareer leh ayaa laga soo sheegayaa magaalada Dhuusamareeb halkaasoo saaka ay wararku sheegayaan in ay gaareen diyaarado ay la socdeen askar ka tirsan...